10 Meelo Epic Lagu Booqdo Shiinaha | Save A tareenka
Home > Tareen safarka Shiinaha > 10 Meelo Epic Lagu Booqdo Shiinaha
Dhulkii halyeeyada, Boqortooyadii, dhaqamada, iyo dadka dhisaya Shiinaha sixir weyn, guriga 10 Meelaha ugu badan ee lagu booqdo Shiinaha. Meel kastaa waa qurux, uga sheekaynaya sheekooyin qadiim ah oo ku yaal dhagax kasta oo dhagax ah, buundada, iyo biyo saafi ah 1000 harooyinka.
Ku xiga 10 Meelaha ugu badan ee lagu booqdo Shiinaha, waxay ahaayeen safarlo xiiso badan kumanaan sano, marka u diyaar garow safarka intaad nooshahay.
1. Meel Epic Lagu Booqdo Shiinaha: Zhangye Danxia Landform
Dhacdo cilmiyadeed oo layaableh, Beerta Qaranka ee Zhangye Danxia oo ku taal gobolka Gansu ayaa ugu sareysa 10 Meelaha ugu badan ee lagu booqdo Shiinaha. In 2009, “Daruur cas” Danxia National park waxay noqotay goob UNESCO ku leedahay dhaxalka adduunka.
Xeryahooda park ee 50 kiiloomitir oo laba jibbaaran, ku nasanaysa cagaha safka buuraha Qilian. Tani layaabka dabiiciga waxay qaadatay kumanaan sano inay sameysato quruxda soo jiidata safarleyda adduunka oo idil. Aaggii beri ahaan jiray badweyn, si tartiib tartiib ah ugu beddelay qaab-dhismeedkeeda dhul u sarreeya iyo waddooyinka, midabka liinta ilaa cagaarka, gabi ahaanba breathtakingly qurux badan.
Sideen Ku Gaadhayaa Danxia Landform-ka Shiinaha?
Waad uga duuli kartaa Zhangye magaalada Lanzhou saacad gudaheed, ama qaado habka bey'ada saaxiibtinimo ee safarka tareenka. Kaliya waa 6 saacadood tareen.
2. Meelo Epic Lagu Booqdo Shiinaha: Terraces Bariiska Yuanyang
Hadaad dooneysid xujo, markaa tacabur epic ayaa sugaya 3,000 tallaabooyinka ku yaal berriga Yuanyang bariis. Waxaad ka heli doontaa barxadahaan bariiska ah ee cajiibka ah gobolka Yunnan, ee buuraha Ailao. Dadka xiisaha leh ee Hani ayaa abuuray muuqaalkan cajiibka ah 2,500 sanado kahor.
‘Ninkii farshaxanka farshaxanka lahaa” farsameeyay a dhaxal ahaan dunida UNESCO goobta gacmahooda, webiga Cas weheliyaan in ka badan 113 kiiloomitir oo laba jibbaaran. Nofeembar waa mid ka mid ah waqtiyada ugu wanaagsan ee la booqdo meelaha labaad ee ugxan ee booqashada Shiinaha.
Sideen Ugu Heli Karaa Xeebaha Bariiska Yuanyang?
First, waa inaad tagtaa magaalada Kunming, ka dibna bas ku raacaya Yuanyang. Tareen rasaasta u aada Jianshui ayaa noqon doona habka ugu raaxada badan ee lagu safro, ka dibna baska u raaca Yuanyang.
3. Meelo Epic Lagu Booqdo Shiinaha: Harada Qinghai
Harada ugu sareysa Shiinaha, Harada Qinghai waa meesha seddexaad ee ugu cabsida badan ee lagu booqdo Shiinaha. Hadaad go aansato inaad booqato haradaas xiisaha badan, waa inaad ogaataa in Harada Koko Nor, waa waqooyi-bari ee Plateau Tibetan. Sidaa darteed, Tibetans iyo suufiyada Tibetan waxay u arkaan inay tahay muqadas.
Xaqiiqdaas waxaa u dheer, isbedelka muuqaalka xilliyeed, ka dhig harada Qinghai mid aan caadi ahayn oo aan la mid ahayn meel kale oo Shiinaha ka mid ah. Macno ahaan waad booqan kartaa harada Qinghai xagaaga, dayrta ama gu’ga, oo aad ogaato haro gebi ahaanba ka duwan markasta.
Sideen Ku Gaadhaa Harada Qinghai?
marka hore, tareenka u raaca Xining, ka dibna waxaad bas ka raaci kartaa ama baabuur kireysan kartaa harada Qinghai.
4. Zhangjiajie – Tiirarka Daran
Qaababka tiirka u eg, seeraha jiqda ah ee Zhangjiajie waa dabeecad la yaab leh oo cabsi badan oo ku saabsan Shiinaha. Zhangjiajie waa goob hal-nooc ah oo ka mid ah qaab dhismeedka dhagaxa ciida ee aanad ka heli doonin meel kasta oo adduunka ah. Meeshan Tacaddi ee lagu booqdo Shiinaha waxay leedahay in ka badan 200 sareysa, spiers, iyo buuro dhulka uun ka soo kacaya.
Intaa waxaa dheer, waxaad nasiib u yeelan doontaa inaad la kulanto saddex qof oo laga tiro badan yahay oo ku nool aaggan fog, iyo noocyada khatarta ku jira sida deerada biyaha Shiinaha iyo salamanka weyn ee Shiinaha.
Sideen Ku Gaadhaa Qaababka Zhangjiajie?
Hadaad ka safreyso Beijing, Shanghai, ama Xian, ka dib tareen u raac Zhangjiajie.
5. Jiuzhaigou – Harooyinka Alpine ee midabada leh
Biyo-dhacyo yaab leh, harooyinka, 9 Tuulooyinka Tibetan, uguna badan muuqaal qurux badan, dooxada Jiuzhaigou ka dhig mid ka mid ah 10 meelaha halista ah ee lagu booqdo Shiinaha. Waxaad ka heli doontaa Jiuzhaigou oo ku taal buuraha Min Shan, runtiina waa a park qaranka.
Dhererka 2,472 m. waxaad ka heli doontaa harada ubaxyada shanta ah. Gabi ahaanba waa u qalantaa safar mahadnaq midabada u gaarka ah, natiijada dhagxaanta travertine ee harada-hoose, iyo algae midabo badan leh. Kuwani 2 xaqiiqooyinka waxay abuuraan saameynta harada Alpine ee dusha sare iyo biyaha buluug-buluugga ah oo ay ku hareeraysan yihiin faun qurux badan.
Sideen Ku Gaadhaa Jiuzhaigou?
Waxaad u baahan doontaa inaad tagto Chengdu, caasimada gobolka Sichuan ee koonfur galbeed Shiinaha bas iyo duulimaad.
6. Gobolka Galbeedka Sichuan – Keydka Dabiiciga ee Daocheng Yading
Haddii aad qorsheyneyso inaad uga baxdo dabeecadda quruxda badan ee Shiinaha, danbow baraf, harooyinka aan nadiifka ahayn, iyo janno socodka, markaa keydka dabiiciga ee Yading ayaa kugu habboon adiga. Waxaad ku ogaan doontaa meeshan halbeegga ah gobolka Sichuan ee Shiinaha, waxaana fiicnaan laheyd inaad waqti sameysid ugu yaraan 2-3 maalmood, si loo ogaado waxyaalaha yaabka leh oo dhan.
The "Last Shangri-La" waxaa ku yaal seddex Chianrezig, Jambeyang, iyo buuraha Chanadorje, sameysma sameys saddex geesle ah, iyo halka aad ka heli doonto aragtida ugu quruxda badan Daocheng. Waxaa intaa dheer, waxaad sifiican ugu diyaar garoobi laheyd 1,000 harooyinka, kuwaas oo ay ka mid yihiin harada "Milk" qaldan, iyo harada cajiibka ah ee Shan Midab Danzhen at 4,600 mitir.
Sideen Ku Gaadhaa Daocheng Yading?
Hadaad waqtiga ku yartahay, ka dib u duulo garoonka diyaaradaha Yading, ka dibna baska garoonka u raaca Daocheng. Waxaad sidoo kale baska u raaci kartaa Shangri-La, halkaasna ka raac baska indha indheynta oo tagaya Yading. Si kastaba ha ahaatee, hadaad runti rabto inaad ogaato meeshan baaxada leh ee Shiinaha, ka dib ku hoydo Daocheng.
7. Meelo Epic Lagu Booqdo Shiinaha: Fenghuang, Gobolka Hunan
Fenghuang waa mid ka mid ah meelaha soo jireenka ah 10 meelaha epic inay booqdaan liiska Shiinaha. Magaaladaan sifiican loo ilaaliyay waxaa laga dhisay Boqortooyada Qing waxayna xafiday jawigeedii hore iyo aragtiyaheedaba 300 sano.
Sidaa darteed, markaad soo gasho magaaladan soo jiidashada badan, waxaad dareemi doontaa inaad macno ahaan dib ugu soconeyso waqtiga. Guryaha alwaaxda ah ee magaalada, buundooyinka, macbudyada lama taabtaan waqtiga waxayna abuuraan jawi yaab leh maalin ama habeen.
Sida laga soo xigtay sheekooyinka, magaalada ayaa magaceeda loo yaqaan "Phoenix" goorma 2 Phoenix ma aysan dooneynin inay baxaan sababtoo ah way qurux badneyd, sidaa darteed waxay ku ekaadeen inay ilaaliyaan.
Sida Loo Helo Fenghuang?
Waxaa jira basas kaliya oo taga Fenghuang, tareen ma leh. Bas ayaad ka raaci kartaa magaalooyinka dhow ee Hunan, sida Changsha, iyo Zhangjiajie.
8. Meelo Epic Lagu Booqdo Shiinaha: Darbiga Weyn ee Shiinaha
Darbiga Weyn ee Shiinaha waa mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee adduunka ka jira, marka si cad ayey ujirtaa 10 Meelaha ugu badan ee lagu booqdo Shiinaha.
Wixii ka badan 2,300 sano Darbiga Weyn ee Shiinaha ayaa xukuma muuqaalka Waqooyiga Shiinaha, waana qodobka ugu xiisaha badan safar kasta oo lagu tago Shiinaha. Nasiib darro, sanadihii la soo dhaafay nabaad-guurka dabiiciga ah iyo dhaawaca aadanaha - 2,000 kiiloomitir ayaa tan ka baxay sooyaal muuqda.
Waa inaad ogaataa in haddii aad ku riyoonayso inaad ka gudubto gidaarka oo dhan, way ku qaadaneysaa 18 bilo ugu yaraan si loo dhammaystiro socodka Darbiga Weyn ee Shiinaha.
Sideen Ku Gaadhaa Darbiga Weyn Ee Shiinaha?
Tareen waad ka raaci kartaa Beijing ilaa xarunta tareenka ee Badaling, ka dibna raac baska xamuulka bilaashka ah ee tagaya xafiiska tikidhada weyn ee Badaling Great Wall.
9. Meelo Epic Lagu Booqdo Shiinaha: Harada Qiandao
Iyadoo in ka badan 1000 jasiiradaha, Harada Qiandao waa mid ka mid ah meelaha ugu halista badan adduunka, iskaba daa Shiinaha. Waxaad ka heli doontaa haro qurux badan oo ku taal waddanka Chunan, Gobolka Zhejiang, daboolaya aag ka mid ah 580 kiiloomitir oo laba jibbaaran.
Kun harada jasiiraddu waa mid aadamuhu abuuray oo la abuuray ka dib abuuritaanka biyo xireenka dhexdiisa 1959. Haddii aad nasiib u yeelatay inaad u safarto harada Qiandao ee Shiinaha, waxaad heli doontaa wakhti epic ah oo lagu ogaanayo harooyinkeeda iyo baarkooda.
Sida Loo Gaadho Lake Qiandao?
Habka ugu wanaagsan ee loogu safro harada Qiandao waa adigoo tareenka ka raaca Hangzhou kuna taga Saldhiga Qiandaohu ka dibna tagsi u raaca Harada Qiandao.
10. Meelo Epic Lagu Booqdo Shiinaha: Lijiang Magaalada Qadiimiga ah
Lijiang waa magaalada labaad ee duug ah 10 meelaha epic inay booqdaan liiska Shiinaha, iyo mid ka mid ah 4 magaalooyinkii duugga ahaa ee ugu wanaagsanaa Shiinaha. Macbadyada Lijiang, Naqshad dhismeedka Naxi ee gaarka ah ee guryaha saqafka ka samaysan ee duugga ah oo leh barxad ku lifaaqan, waa aragti.
Markaad dhex marayso Lijiang’s jidadka cobbled, faynuusyada cas cas, oo la ogaado 354 buundooyinka, waxaad la yaabi doontaa oo ku cajab galin doontaa dhaqanka dadka Naxi, iyo dhismaha.
Sideen Ku Gaadhaa Magaalada Qadiimiga ah ee Fenghuang?
Habka ugu fiican ee lagu tago Lijiang magaalada qadiimiga ah waa qaadashada Tareenka Shiinaha ilaa xarunta tareenka ee Lijiang, ka dib bas ama gaari.
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno qorsheynta safarkaaga kuwan 10 Meelaha ugu badan ee lagu booqdo Shiinaha tareen ahaan.
Do waxaad rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "10 Meelaha Epic Badankood Lagu Booqdo Shiinaha”Bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fepic-places-visit-china%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
BestofChina BestTravelDestinationsChina Chinabytrain Chinatrains Chinatrip TareenTravelChina travelchina BooqoChina